Miatrika fanadinana ny mpitondra | NewsMada
Hadiva ho tapitra ny telo volana faharoa ho an’ny fampianarana. Hanomboka amin’ny volana marsa ny fanadinana, hitsapana ny ezaka vitan’ny tsirairay. Tsy afa-miala amin’izany koa ny fanjakana fa hotsapain’ny Tahirim-bola iraisam-pirenena aorian’ny volana marsa ho avy io. Nanomboka tamin’ny volana oktobra ny fanomezana ny lesona tsy maintsy ianarana. Raha ny kabary sy fahaiza–miresaka aloha, mahay ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny mitanisa ny zava-bitany tao anatin’ny RRI indroa miantoana. Raha jerena ny vokatra hita maso sy ny vaovao miseho isan’andro indray, toa manalasala ihany ny manamarina ny voalaza. Manjaka sy mirongatra ny tsy fandriampahalemana an-tanàn-dehibe sy ny asan-dahalo. Misy ny kere any atsimo, ho an’ny lafiny sosialy.
Maro ny fanovan-drafitra sy fepetra vaovao noraisina amin’ny fitantanam-bolam-panjakana. Napetraka ny ACD, saingy notsipahin’ny mpandraharaha tsy miankina mivondrona ao anatin’ny Gem. Terena hampihatra azy koa ny tetikasa Ambatovy, na manana ny “lalàna” mifehy azy manokana aza (LGIM), fa kosehin’ny “didy tsotra” (arrêté) avoakan’ny minisitera. Mitaraina ny mpandraharaha tsy miankina fa tsy hita soritra ny tena tohana ataon’ny fanjakana azy ireo, tsy azo antoka ny fampiasam-bola vahiny ary efa niala teto Madagasikara ny sasany. Izany hoe, mitombo indray ny tsy an’asa, raha ny famoronana asa no tokony hampiroboroboina.
Tsy hita taratra ny fiovan-javatra fa tena mahaleo tena ny fitsarana, raha ny fitarainana marobe ataon’ny voadona. Nohamafisin’ny Transparency International fa mbola anjakan’ny kolikoly i Madagasikara. Tsy nisy niditra am-ponja ny mpanao trafika harena voajanahary, toy ny andramena, na nisy aza ny efa notazonina am-ponja vonjimaika.
Maro ny sora-bola notononin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena. Saingy, miankina amin’ny valim-panadinana aorian’io volana marsa io ny tena hamantarana na ho azo na tsia. Azo adika fa mandray anjara amin’io fanadinana io ny mpikambana ao amin’ny governemanta, ary aorian’izay vao mety hiova na tsia.